Maamulka Korjoogteynta Beeraha ee Ruushka ee Jamhuuriyadda Bashkortostan - Nidaamka baradhada
Maamulka Rosselkhoznadzor ee Jamhuuriyadda Bashkortostan wuxuu xukumaa dhoofinta in ka badan 400 tan oo baradho ah
Habka cusub ee biyaha loogu daweeyo tas-hiilaadka baakadaha
Beeraleyda Astrakhan iyo tafaariiqda. Dhibaatooyinka is-dhexgalka
Ruushka gudahiisa, wuxuu bilaabi karaa soo saarida chips chips Estrella
Ruushka gudahiisa, baahida loo qabo ganacsi diyaarsan in la sameeyo ee beeraha ayaa kordhay
Ra'yi uruurinta CLIMMAR: 80% ganacsatada reer Yurub ee ka ganacsada beeraha ayaa dareemaya saameynta masiibada
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa codsaday in dib loogu celiyo kabitaannada shidaalka iyo saliidda
Suuqa basasha Jarmalka ee qalalan ayaa kobcaya ilaa $ 53 milyan sanadka 2019
Qiimaha baradhada iyo karooto ayaa hoos u dhacay
Nolosha xaaladaha "Xeerka cusub". Dhaqanka macaamiisha Boqortooyada Midowday
Turkmenistan waxay goosataa baradhada iyo basasha
Xamaasleerayaasha Ruushka ayaa ugu yeeray qiimaha uguyarada badan ee ruble ee doolarka iyaga loogu talagalay
Wax ii sheeg shirkadaada
Khamiista, Luulyo 9, 2020
Meey 29, 05:00
в Gobolka, Wararka gobolka
Ilaa bilowgii 2020, Maamulka Rosselkhoznadzor ee Jamhuuriyadda Bashkortostan waxay xakameysay dhoofinta 401,8 tan oo baradho bakhaar ah. 21 badeecadood oo fara badan oo ka socda Bashkortostan ayaa loo raray Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Turkmenistan.
Dhammaan noocyada badeecadaha la xakameeyay ee khatarta jir dhiska, waxaa la qaaday tallaabooyin xakameyn ah, oo ay ka mid yihiin baaritaanka, tijaabada iyo baarista Xarunta tixraaca ee FSBI Bashkir ee Rosselkhoznadzor. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka baarista, waxaa la aasaasay in alaabada ay u hoggaansamaan shuruudaha jirka ee karantiimiga ah ee wadammada soo dejinta.
Wadar ahaan, 21 shahaadooyin xagga jidhka ah ayaa laga soo saaray baradhada cuntada.
Dhismo adag oo loogu talagalay kaydinta, kala soocida iyo ka shaqaynta baradhada ayaa laga hirgalin doonaa Gobolka Moscow
Beeritaanka baradho dambe. Chips warshadaha alaabta alaabta ceyriinka ah alaabooyinka guusha
Kabardino-Balkaria, soosaarkooda baradho ayaa ka sarreysa tii sanadkii la soo dhaafay
Farsamada qarniga XNUMXaad. Khibradda gobolka Novosibirsk
AgroAlliance-NN: "Kaliya kuwa aan ka baqaynin in ay gacantooda is gashadaan ayaa ka badbaada beeraha"
AGROTRADE Group of Shirkadaha, 2009–2020. Farriimaha iyo alaabada joornaalka “Nidaamka baradhada” (oo ay iska diiwaangelisay Adeegga Federaalka ee Korjoogteynta Isgaarsiinta, Teknolojiyada Macluumaadka iyo Saxaafadda Mass, Shahaadada PI No. FS77-63848 taariikhdeedu tahay Janaayo 09.01.2009, 18) waxaa lagu calaamadeeyay "KS". Daabacaadaha qaarkood waxaa ku jiri kara macluumaad loogu tala galay isticmaaleyaasha da'doodu ka yar tahay XNUMX sano. Markaad u gudbineyso farriimaha iyo agabka joornaalka "Nidaamka baradhada" ee meel dhexaad ah, xiriiriye isha ayaa loo baahan yahay.waraaqaha@potatosystem.ru